आयुष र प्रतिभा फिचर्ड निर्दोष माया : RajdhaniDaily.com -
राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन ६ जेठमा
महेश्वर गौतम - April 23, 2021 0
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा ६ जेठमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोकेपछि आयोगले...
भेन्टिलेटर र आईसीयू पाउनै मुस्किल
प्रशान्त वली - April 23, 2021 0
काठमाडौं । प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा आईसीयू र भेन्टिलेटर अभाव देखिएको छ । देशभर संक्रिय संक्रमित १२ हजार ६ सय ९० मध्ये २...
कर्मचारीमा पनि कोरोना, सेवाग्राहीमा पनि सन्त्रास
राजधानी समाचारदाता - April 22, 2021 0
सप्तरी, राजविराज । भारतबाट घर फर्केका एक कर्मचारीमा कोरोना संत्रमण पुष्टी भएको छ । यहाँ स्थित गजेन्द्र नारायण सिह अस्पतालमा गरिएको पिसिआर परिक्षणको विहीवार...
संक्रमित बढेकाे बढ्यै, मास्क समेत लगाउन मान्दैनन् स्थानिय
डीबी विष्ट - April 22, 2021 0
बझाङ । बझाङमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । विहीबार दिउसो जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का ४८ बर्षिया पुरुषको मृत्यु भएको...
कोरोना संक्रमणबाट पर्सामा एकै दिन २ जनाको मृत्यु
तुलसी भण्डारी - April 22, 2021 0
वीरगन्ज । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि पर्सामा एकै दिन दुई संक्रमितको मृत्यु भएको छ । वीरगन्ज १६ की ६१ वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको...
एमाले बैठक बालुवाटारमा सुरु
राजधानी संवाददाता - April 23, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ । आजको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले दिएको स्पष्टीकरण...
‘ओलीले जाली कुरा गरे, उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँगको वार्तामा जाली कुरा गरेको बताएका छन् । उनले शुक्रबार...
ओली–नेपाल छलफलमा सहमति किन जुटेन सकेन
सुभाष साह - April 23, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । काठमाडौंको होटेल...
पार्टी एकता जोगाउन खनाल-नेपालसहित १५ नेताको सयुक्त अपिल
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित १५ नेताले पार्टी एकता जोगाउने काममा योगदान गर्न सबैमा आह्वान गरेका छन् । नेपाल...
विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण भएपछि धनकुटा नगर क्षेत्रका विद्यालय नौ दिन बन्द
रबिन कटेल - April 22, 2021 0
धनकुटा । विद्यार्थीमा कोरोना भइरसको संक्रमण देखिएकाले धनकुटा नगर क्षेत्रका विद्यालय नौ दिन बन्द गरिने भएको छ । धनकुटा नगरपालिका संकट व्यवस्थापन समितिको वुधवार...
धनकुटामा बस दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते
धनकुटा । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित चारखोले गोलाइमा बिहिबार दिउँसो यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा छ जना घाइते भएका छन् । विराटनगरबाट धनकुटाको जितपुर जाँदै...
अछाममा कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
अछाम । अछामको साँफेबगर नगरपालिका–६ भागेश्वरका ६५ वर्षीय एक पुरुषको कारोना भाइरसबाट आज बिहान मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल राजपुरका...
नेपालद्वारा मलेसियालाई २१८ रनको लक्ष्य
काठमाडाैं । त्रिदेशीय टी–२० क्रिकेट सिरिजअन्तर्गत आजको खेलमा नेपालले मलेसियासामु जीतका लागि २१८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस...
सिटी र टोटनह्याम विजयी
एजेन्सी - April 22, 2021 0
लन्डन । इग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा गएराति म्यान्चेस्टर सिटी र टोटनह्याम हट्सपर विजयी भएका छन् । तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान सिटीले एस्टन भिल्लालाई...
चेन्नइ शीर्ष स्थानमा
नयाँदिल्ली । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) टी–२० क्रिकेट अन्तर्गत चेन्नइ सुपर किङ्स विजयी भएको छ । बुधबार राति भएको खेलमा चेन्नइले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई...
नेपाल र नेदरल्यान्ड्स फाइनलमा
राजधानी संवाददाता - April 22, 2021 0
काठमाडौं । मलेसिया र नेदरल्यान्ड्सले बराबरी खेलसँगै घरेलु टोली नेपाल त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । वर्षाले प्रभावित खेलमा मलेसियालाई जितका...
को होला वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी ?
विजय नेपाल - April 21, 2021 0
पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको पाँचौ पोखरा स्पार्टस् अवार्ड–२०७६/७७ को वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी (पुरुष) विधामा ३ खेलाडी मनोयनमा परेका छन् । करातेका...
वास्तविक राष्ट्रसेवक कहिले पाइएला ?
सागर पण्डित - April 23, 2021 0
कुनै पनि देशको राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारलाई सफल तथा असफल बनाउने प्रमुख भूमिका नै राष्ट्रसेवकका रूपमा रहेका कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई...
नेपाली विद्यार्थीको भविष्यसित खेलबाड
श्रीमननारायण - April 23, 2021 0
उत्तरी छिमेकी चीनको विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १ सय ५० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी चिनियाँ सरकारको नेपालीप्रतिको भेदभावपूर्ण एवं दुराशययुक्त नीतिका कारण अन्धकारमय जीवनको सामना...
संक्रमण रोकथामका लागि गम्भीर बन
राजधानी समाचारदाता - April 23, 2021 0
कोरोना महामारी संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल यसको उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ । नेपाल आफैंमा ट्रान्जिट पनि हो । भारत र चीनजस्ता ठूला...
क्लेप्टोमेनियाँ रोगको बिगबिगी
डा. देवीप्रसाद आचार्य - April 22, 2021 0
क्लेप्टोमेनियाँ एउटा मानसिक रोग हो । यो रोगले प्रभावित मानिसमा अरूको सामान, सम्पति वा कुनै पनि वस्तु चोरूँ चोरूँ जस्तो लाग्दछ । सामान्यतया मानिसमा...
जीवनको आधार नै जैविक विविधता
विश्वनाथ खरेल - April 22, 2021 0
विश्वको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ३१ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको छ भने कुल वन क्षेत्रको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको अनुमान छ । एक...
ध्रुव लम्साल - April 21, 2021 0
गएको जेठमा रामचन्द्र काकाले हलगोरु बेचेछन् । विगत वर्षहरूमा गोरुको सिजन जेठमै सुरु हुन्थ्यो । जेठ नलाग्दै गोरु खोजेर हल बनाइसक्थे । आठ वर्षअघि...
Home Not-to-be-missed आयुष र प्रतिभा फिचर्ड निर्दोष माया
आयुष र प्रतिभा फिचर्ड निर्दोष माया
By केबी मसाल
काठमाडौं । उदयमान युवा गायक आयुष खतिवडाले आफ्नो दोस्रो अफिसिएल म्युजिक ‘निर्दोष माया’ सार्वजनिक गरेका छन्। किशोरावस्थाको प्रेम र आकर्षणलाई वर्णन गरिएको गीतमा शब्द गायक खतिवडाका बुवा विकल खतिवडाले लेखका हुन्। गीतमा स्वयम् गायक खतिवडाको संगीत र संगीत संयोजन रहेको छ।
म्युजिक भिडियोमा गायक आयुष खतिवडा र प्रतिभा कटुवाल फिचर्ड छन्। ज्याज प्रडक्शनले निर्माण गरेको यस भिडियोमा श्रीजन प्रजापतिको छायांकन रहेको छ। भिडियोमा अनिल न्यौपाने क्रियटिभ सुपरभाइजर रहेका छन्। पुनम शाक्य निर्मात्री रहेको यस भिडियोलाई अमन महर्जनको सम्पादन र निर्देशनमा तयार पारिएको हो। गायक खतिवडाको आधिकारिक च्यानल ‘आयुष खतिवडा’ मार्फत भिडियो सार्वजनिक भएको हो।
रक र पप गायन साथमा बाध्यवादन रुचि राख्ने १४ वर्षीय गायक खतिवडा झापामा ९ कक्षामा अध्यनरत छन्। उनले ट्रीनिटी कलेज अफ लन्डन बाट गितार र किवोर्डमा राम्रो अंकका साथ पास गरेका छन्। यसअघि उनले ‘आजै हो’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
सबै सिनेमा हल फेरि बन्द
डब्बु क्षत्री - April 22, 2021 0
काठमाडौं । नेपालका फिल्म हल सञ्चालक यतिबेला फेरि निराश भएका छन् । नेपालमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर बढेपछि सरकारले सबै सिनेमा हल बन्द गर्ने...
साताभर ३२ अर्बको सेयर कारोबार
पूजा चँदारा -
काठमाडौं । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा ३२ अर्ब सेयर कारोबार भएको छ । सेयर बजार सूचक नेप्सेले भने गत साताको तुलनामा ८७.४५...
वैदेशिक लगानीमा ८ दशमलव ८ प्रतिशत कमी
पूर्णभक्त दुवाल -
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी १...
तुलसी भण्डारी -
काेराेना विरूद्ध खोपकाे दोस्रो मात्रा मङ्गलबारदेखि ( कुन दिन लगाउने सूचीसहित)
काठमाडाैं । सरकारले मङ्गलबारदेखि कोभिड–१९ को दोस्रो मात्राको खोप लगाउँदै छ । गत माघ १४ देखि फागुन १० गतेसम्म कोभिड–१९ को पहिलो मात्रा लगाएका...
नवनिर्वाचित पत्रकारले गरे पदस्थापन
सप्तरी, राजविराज । पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि पदस्थापना गरिएको छ । राजविराजस्थित शाखाको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रमबीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष...
ओली दम्भको पहिलो धक्का पत्रकार महासंघको निर्वाचन : नेपाल
सुरज श्रेष्ठ -
काभ्रेपलाञ्चोक । ओली दम्भको पहिलो धक्का पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पाएको एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताएका छन् । नेपाल पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै...
श्रीमती छोडेका ब्यक्तिसंग अनुष्काको अफेयर भन्दै हल्ला गर्ने को ?
मुम्बई । पछिल्लो केही दिनदेखी बलिउडमा एउटा हल्ला चल्यो ‘बाहुबली’ नायिका अनुष्का शेट्टी श्रीमतीसंग सम्बन्ध बिच्छेद गरेका निर्देशकसंग प्रेममा छिन् ।’ यो हल्ला चलाउने...
सुरु भयो नागिन–४ को सुटिङ
मुम्बई । लकडाउनका कारण बन्द भएको इन्टरटेन्मेन्ट इन्डस्ट्री बिस्तारै खुल्न थालेको छ । भारतमा मनोरञ्जन उद्योग महवपूर्ण उद्योगमध्ये एक हो । भारतको महाराष्ट्र सरकारले...
प्रचण्ड, नेपाल र खनालसहितका नेताहरु राष्ट्रपति भेट्न शितल निवासमा
Breaking News Roshan Shrestha - July 5, 2020 0
काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतम...
नेपालमा पुनः संक्रमण दर शून्य
भर्खरै Roshan Shrestha - July 12, 2020 0
काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...
नेपाली चलचित्र अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग
Not-to-be-missed Kumar Raut - April 11, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र उद्योगलाई ५४ वर्ष पूरा गरेको छ । यो ५४ वर्षको उतारचढापपश्चात् यति बेला बल्ल नेपाली चलचित्र उद्योग सरकारको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता...
‘बाबा, हामीलाई कोरोना नसार्नू है !’
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - July 16, 2020 0
धनगढी । चीनको वुहानबाट शुरु विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको त्रासले विश्व आतङ्कित भइरहेका बेला नेपालमा समेत फ्रान्सबाट आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरस...
अर्थ Sushila Bishwokarma - August 23, 2020 0
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य ह्रास आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार पहेँलो धातुको मूल्यमा प्रतितोला रु ४०० ले...
अभिनेता राजेश हमालको म्युजिक भिडियो मोड
Not-to-be-missed Kumar Raut - November 20, 2020 0
काठमाडौं । अग्रज अभिनेता राजेश हमाल पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा बढी व्यस्त हुन थालेका छन् । भिडियोप्रति उनको मोह अचम्मले बढेको छ । लकडाउनका...
‘स्थानीय तहले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन’
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - March 7, 2020 0
काठमाडौँ । सरकारले तर्जुमा गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ संविधानपछि शिक्षामा सङ्घीयताको व्यवस्थापनका...
थप ४३९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३५२२ जना डिस्चार्ज
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - October 16, 2020 0
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ४ हजार ३९२ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भएको छ । योसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३७ हजार...
प्रमुख Sushila Bishwokarma - November 28, 2020 0
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न १ः०० बजेदेखि बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा...
यस वर्ष होली नमनाउन प्रशासनको आग्रह
प्रदेश Dhruba Lamsal - March 5, 2020 0
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले यस वर्षको होली नमनाउन आग्रह गरेको छ । भीडभाडमा नजान तथा भेला, सभा, सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना नगर्न अनुरोध...
ओली–नेपाल वार्ता सकियो
मेरियट होटलमा ओली–नेपाल पुनः छलफल
राजधानी समाचारदाता - April 23, 2021
२३५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
राजधानी समाचारदाता - April 21, 2021
ह्यास फोटो नेपालमा बारपाक
राजधानी संवाददाता - April 20, 2021
भारतमा काेराेनाकाे नयाँ रेकर्ड : एकै दिनमा दुई लाख ६१ हजार सङ्क्रमित, १५०० को मृत्यु
एजेन्सी - April 18, 2021
कतारी रियाल वैशाख २७ भित्रै साट्नु पर्ने, त्यसपछि नचल्ने !
राजधानी समाचारदाता - April 20, 2021
नौ महिनामा व्यापार घाटा १० खर्ब